Buyekeza: I-Wraith 'Hits Home Video eneTurbo ekhokhiswe iVestron Video Blu-Ray - iHorror
Ikhaya Imisebe ye-Blu Buyekeza: 'I-Wraith' Ishaya Ividiyo Yasekhaya eneTurbo ekhokhiswe iVestron Video Blu-Ray
Imisebe ye-BluIzindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoAma-movie ama-Horror
by UJacob Davison July 20, 2021
Ukukhishwa okusha sha kweLionsgate's Vestron Video Collector's Series kushisa injoloba futhi kufika ku-blu-ray naku-digital! Ihlelo le-1986 lomjaho wokuphindisela umjaho wesabekayo I-Wraith ubuya ngaphesheya ukuthola izithameli ezintsha kokuthunyelwe kwethu Kuyashesha Futhi Kuthukuthele emphakathini futhi le vidiyo entsha yasekhaya igcwele zonke izinhlobo zezici.
I-Wraith ihlelwe edolobheni elincane lasentshonalanga yasentshonalanga yaseBrooks, okungaba yindawo ekahle yokuhlala… ukube bekungelona iqembu lezigelekeqe elinodlame. Beholwa nguPackard ongenamusa (uJohn Cassavetes), iqembu lakhe le-punks yasemgwaqeni ligada imigwaqo emikhulu yezisulu ukuba zenze isihluku nezimoto ezizogawulwa. Isisulu sabo sokugcina ukuba yisoka likaKeri (uSherilyn Fenn) ngaphambi komshayeli ongaqondakali ophethe izigqoko kanye nesigqoko sokuzivikela kuDodge Turbo Interceptor ofike futhi aqhubeke nezigqebhezana zomgwaqo ku-asphalt… kuze kube sekufeni. Manje sekungumjaho ophikisana newashi njengoba iqembu lezigelekeqe libulawa ngumgwaqo ngamunye futhi lithola imfihlakalo I-Wraith nokuxhumeka kwayo kumfana omusha edolobheni, uJake (Charlie Sheen).
I-Wraith ifilimu elihehayo nelinobuhle elihle ikakhulukazi lesikhathi salo. Inhlanganisela engajwayelekile yothando lwabantu abadala abasebasha, impindiselo engaphezu kwamandla emvelo, kanye nemimoya yezimoto, kusabonakala nanamuhla. Futhi kusukela esikhathini ngaphambi kwe-CGI, lezi zimoto zemoto zingamaphesenti ayikhulu ezisemthethweni futhi ziyajabulisa ngokwanele ukuzibuka zodwa ngaphesheya kwe-Arizona desert. Futhi yeka isiga! Ngaphandle kwalabo okukhulunywe ngabo ngaphambili ubuye ube neRandy Quaid eyibhomu njengomphathi oyisikhulu kanye nohlobo lokuhlala njalo uClint Howard njengo I-Eraserhead ubuchopho obubukeka beqembu lomgwaqo. Indaba isikwe kancane futhi yomile, kepha idutshulwe ngokumangazayo futhi inezinto ezijabulisayo ezanele zokugcina uzibandakanya.
Njengokujwayelekile, iVestron Video ikugaxe kakhulu lokhu kukhishwa kuze kube seqophelweni ngezici ezikhethekile. Zisuka nje ku-bat, unamasethi amabili ahlukene wokuhlaziya okulalelwayo. Omunye oqukethe umbhali / umqondisi uMike Marvin nomunye onabalingisi uDave Sherrill noJamie Bozian. Kunokusatshalaliswa okuhle kwezingxoxo ngazinye kufaka phakathi umuntu ngamunye noMike Mrvin elandisa ngokwenziwa kwe-movie, inhlekelele eyenzeka isethi lapho othile efa ngesikhathi sokushayisana, nokuvuka kwakhe kanye nesimo sehlelo I-Wraith. Ingxoxo noClint Howard mayelana nendima yakhe nezingxoxo nomxhumanisi we-stunt uBuddy Joe Hooker, umxhumanisi wezokuthutha uGary Hellerstein, nomdidiyeli we-VFX uPeter Kuran no-animator we-VFX uKevin Kutchaver.
Izingxoxo eceleni, kukhona i-featurette enhle yesigamu sehora ekhipha izindawo zokudubula I-Wraith ngaleso sikhathi futhi manje ePhoenix, e-Arizona, i-featurette yamaphuzu angawodwa, ukulandelana kwesihloko okuhlukile, igalari enganyakazi, namathrekhi / izindawo ze-TV. Njengoba ngishilo, le moto igcwele zonke izici. Ngakho-ke, uma unesimo sodlame oluthile lwezimoto, mhlawumbe unikeze I-Wraith ukugibela.
I-Wraith isiyatholakala manje ku-blu-ray naku-digital.
1980s2021I-Blu-RayCharlie SheenUClint HowardUNick CassavetesBuyekezaI-WraithIvidiyo yeVestron
I-trailer kaJackass Forever iletha iMayhem engenangqondo